CIA VS. CPA - Yeyiphi Lokuqinisekisa Ulunge ngakumbi? [It's a Close Call]
CIA vs CPA: Yeyiphi Certification Okona kulungileyo kuni?
23 Aug CIA vs CPA: Yeyiphi Certification Okona kulungileyo kuni?
Posted at 22:50h ngo Alternate Articles yi Bryce Welker, CPA 1 Comment
Yinto umbuzo olukhohlisayo ukuphendula: Ukuba uba Certified Auditor yangaphakathi (CIA) okanye Certified eziMali Public (CPA)? Zombini ayahlonitshwa klk professional ukuba uphucule ubuchule bakho nokuphucula umsebenzi wakho, kodwa wena ukhetha indlela? Masiqalise ngokucazulula into yokungena ngalinye liya kufuna ngokwemiqathango izibophelelo ixesha, umzamo, kunye neendleko.
CIA vs CPA: Iimfuno Lokuqinisekisa
CIA vs CPA: le ukuhlolwa
CIA vs CPA: Imivuzo
Certified Accountants baseburhulumenteni kulindeleke ukuba benze imisebenzi yabo ngokusesikweni. Ngoba? Ngenxa yokuba anoxanduva imisebenzi ukwenza ezinxulumene mali karhulumente ingxelo zemali, ezifana ekulungiseleleni ingxelo zemali, ukulungiselela irhafu, kunye irekhodi ngokugcina-zonke ngokungqinelana iseti ikhowudi imilinganiselo. CPAs ngaba bantu kuphela kuvunyelwa ngokusemthethweni ukuba zilusayine zize zilungenise iingxelo zemali kwi IRS. Ukuze ube CPA kufuneka uphumelele CPA ekuhlolweni notorious nolawulwa i AICPA. Ifaka 4 iinxalenye: Accounting kunye nokuhlola, Business Environment and Concepts, Financial Accounting Reporting, and Regulation.
Ukuze ube CPA kufuneka uphumelele CPA ekuhlolweni notorious nolawulwa i AICPA
Certified Auditors Internal ingqalelo phantse ngokukhethekileyo ukwenza uphicotho lwangaphakathi ezezimali lenkampani kunye izilawuli yangaphakathi. CIAs nako ukwenza uphicotho lweenkqubo zolwazi, komthetho kunye neminye iprotocol zangaphakathi isitshixo. Le indima ukuba ufuna ukuba usoloko bayithobele imigangatho ephezulu yemikhwa. Kanye CPA, ukuba abe CIA kufuneka kudlule iimviwo. CIA Uviwo ilawulwa yi-Institute of Internal Auditors (IIA) kwaye ibandakanya 3 iinxalenye: Knowledge Business for Auditing yangaphakathi, Practice of Auditing yangaphakathi, kwaye Essentials of Auditing yangaphakathi. Ungafunda okuninzi malunga best izifundo PrEP CIA Apha.
Ukuze abe CIA, kufuneka ukuhlangabezana nezi mfuno zilandelayo:
Zuza isidanga iminyaka emine post-yesibini ukusuka yiyunivesithi ovunyiweyo. (Oku singamiswa endaweni kunye namava omsebenzi; nokuba yiminyaka emihlanu ngamava omsebenzi kunye kwiminyaka emibini esikolweni post-secondary, okanye iminyaka esixhenxe zokuphicothwa iqinisekisiwe.)
iminyaka emibini uqinisekise amava lomsebenzi wophicotho (isidanga zemastas lingatshintsha unyaka omnye)
Phosela 3 part-CIA Exam
Hlawula yonke isicelo ekuhlolweni iimali
Hambisa iFomu Reference Character etyikitywe CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA, okanye umqondisi umsebenzi wakho
Uyavuma ukuba uya kuyithobela Code ye IIA kaThixo yeeNqobo eziseSikweni
Nika ubungqina zokuzazisa
Ixesha elifunekayo lokuba abe CIA iyahluka kakhulu, esekelwe kwi iinketho ezininzi lokufezekisa imfundo / iimfuno amava emsebenzini. Kuya kufuneka 4 iminyaka kwikholeji ukuze bafumane degree yakho zidanga. Emva koko ke kuya kufuneka 2 iminyaka yamava yomsebenzi evunyiweyo, leyo ezisa lilonke ku 6 iminyaka. IIA ivumela 4 iminyaka Kwathi iimviwo (nalo ireyithi yokupasa esezantsi kakhulu), ngoko kuya kuthatha 10 iminyaka ukuba babe eqinisekise. Ukuze abe CPA, kufuneka ukuhlangabezana nezi mfuno zilandelayo:
Ukuhlangabezana neemfuno zemfundo kunye namava U.S. karhulumente apho uya khona ukuba ilayisensi. Ezi ezahlukeneyo ukusuka kurhulumente ukuya kurhulumente, kodwa ngokubanzi iimfuno cela ukuba ubuncinane isidanga ngonyaka-ezine accounting, ushishino okanye intsimi ezinxulumene KUNYE emibini yomsebenzi accounting jikelele
Phosela-icandelo ezine Exam CPA
I siyakukhuthaza ngamandla ukuba baphande ngokusondeleyo iimfuno karhulumente phambi egumbini uhambo lwakho CPA. CIAs Onokuthenjwa, abo certified kuzwelonke, CPAs kufuneka ufumane ilayisensi elungiselelwe amacandelo karhulumente ngamnye abasebenza. Wena uchitha emhlabeni 5 iminyaka ukufumana isidanga sakho kunye / okanye isidanga master ukuba ukuzalisekisa 150 imfuneko iiyure credit ukuze abe CPA. Ukuba imeko yakho kufuna amava omsebenzi, ke ufake enye 2 iminyaka. I AICPA ivumela 18 iinyanga Kwathi iimviwo CPA. Ukuba zonke ezi zinto 8 ½.
CIA Exam yi 100% ukubala-based kwaye ibandakanya zizahlulo ezithathu ezahlukeneyo:
Ingxenye 1: Basics Internal Audit
Ingxenye 2: Practice Internal Audit
Ingxenye 3: Internal Audit Knowledge Elements
Ungathatha CIA uviwo ngalo naliphi na ixesha lonyaka kuyo nayiphi na enye 500+ amaziko Pearson Vue ehlabathini lonke. Uviwo inikezwa 16 iilwimi, okubalwa Arabic, IsiTshayina (yesintu), IsiNgesi, IsiFrentshi, IsiJamani, IsiHebhere, Indonesian, IsiTaliyani, IsiJaphani, Korean, Polish, IsiPhuthukezi, IsiRashiya, Spanish, Turkish, kanye Thai. Ukuba ilungu IIA, ixabiso le sihlole lo $990. Non-amalungu kufuneka ahlawule ixabiso epheleleyo kwi $1,150, yiyo ke le nto kubalulekile ngexesha lakho ukuze abe lilungu IIA. Le Exam CPA yenziwe amacandelo amane:
Audit ne kwa (AUD)
Financial Accounting and Reporting (AYIKHO)
Kanye CIA Exam, i Exam CPA yi 100% computer ngokusekelwe. kunjalo, kokuba kuphela nge Prometric Testing Centres ngexesha windows ezine iinyanga ezimbini kulo nyaka. Uviwo olunye angalufundiyo ngoMatshi, Isilimela, KuSeptemba okanye ngoDisemba. Ixabiso le-Exam CPA yahluka ngu wombuso / ulawulo, kodwa ngokubanzi luqala ekubeni $600 ukuba $800 bonke amane amacandelo.
Ngokubanzi, CPAs imali engaphezu kwe CIAs, kodwa oku konke kuxhomekeke kwisihloko yomsebenzi CIA kaThixo. Ezinye izinto kumisela CIA okanye CPAs salary, ezifana nendawo, isihloko, iminyaka yamava liya kugqiba umvuzo wakho. Umvuzo median ukuba CPA yi $62,123 yaye $59,677 ngokuba CIA. Kutshanje kuye kubekho imfuno esiba yokuphendula liqiniswe yaye ngeso elibukhali kakhulu., ukukhula umsebenzi wokwenza babenethemba ukuba zombini CIAs kunye CPAs.
Kanjalo, oku konke kuxhomekeke koko ufuna ukukwenza. Le certification CIA kulula ukufumana ngaphezu CPA ukususela uviwo swi 1 into enkulu accounting, kanti uviwo CPA isekelwe 4. Ukuba uyakuthanda umsebenzi iinkcukacha kunye nokuphanda, isiqinisekiso CIA wayeza ukusebenza kakuhle kuwe. Kwelinye icala, a CPA nako ukwenza umsebenzi uphicotho kodwa ngamathuba amakhondo ngakumbi kwimimandla iirhafu ingxelo, ngokudala sokuqinisekisa igagasi. Ukuba ukhetha zophicotho, tax, ingxelo kunye nokulawulwa, ngoko ke indlela CPA iza kuba ngcono ukuba. Ukuba ufuna standout ngakumbi kwihlabathi zezimali, ungaya zombini! Ukuze uqale uhambo lwakho CPA, kufuneka uqale uphando oko Review ke kufuneka usebenzise ukufundela iimviwo. Eli ke linyathelo lokuqala enkulu! COMPARE TOP CIA IIKHOSI UKUPHONONONGWA
FIND THE BEST KWAKHONA CPA YEKHOSI
Posted at 25 EyoKwindla, 2018 16:31 PM Reply